Healing for Everyone! Mobile Legends မှာ အကောင်းဆုံး Support များ ! | Codashop Blog MM
Healing for Everyone! Mobile Legends မှာ အကောင်းဆုံး Support များ !
Support Hero တွေကတော့ တကယ့် အရေးအကြီးဆုံးသူတွေပါဘဲ။ သူတို့ အသက်နဲ့ခန္ဓာကို ပေးဆပ်ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်အောင်လုပ်ရတာပါ။
Support Hero တွေက သင် အကာအကွယ်လိုချင်ရင်တော့ သူတို့စီအမြဲသွားသင့်ပြီး အချိန်မရွေး Heal နိုင်ပါတယ်။ Maskman တွေနဲ့ တစ် Lane ထဲနေပြီး Maskman တွေကို လုံခြုံ မြန်ဆန်စွာ Farm နိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေဆို Support Hero တွေက သူတို့ အသက်ကိုတောင် စတေးပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခတ်မှာ Support Heors တွေကို လူကြိုက်များလာပါပြီ။ သင်တို့ အသင်းကိုအနိုင်ရဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုက်တဲ့ အကောင်းဆုံး Support တွေကို ရွေးချယ်ပြီး ပြောပြပေးထားပါတယ်နော်။
ကဲ မနားဘဲ Angela အကြောင်းပြောကြရအောင်။ Angela ရဲ့ Ultimate Skill ကတော့ သိပ်ကိုထူးခြားပါတယ်။ သူက လူကြိုက်တော်တော်များတဲ့ Hero ပါဘဲ။ သူက အထူးသဖြင့် Helcurt နဲ့ Hanabi တို့လို Damage Dealer အဖွဲ့၀င်တွေနဲ့တွဲလိုက်ရင် လုံး၀ကို တားလို့မရတဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ အတွဲဖြစ်သွားပါတယ်။ Angela က သူနဲ့တွဲနေတဲ့အဖွဲ့၀င်ကို အကာအကွယ်အဖြစ်နေပေးပြီး သူ့ Skill ကနေလဲ Damage တွေပေးပါတယ်။ Angela ရဲ့ ပထမဆုံး Skill က အဖွဲ့၀င်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ HP ကို Heal Effect နဲ့ပေးပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ Skill ဖြစ်တဲ့ Crowd Control Spell က အရမ်းပြင်းပြီး ထွက်ပြေးချင်လောက်အောင် စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးပါတယ်။
Mathilda ကို ကျွန်တော်တို့က Support/Assassin Hybrid အနေနဲ့ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒီလို ၂ မျိုးပေါင်းထားတာကို ကျွန်တော်တို့ မြင်ဖူးတာ ပထမဆုံးမို့လို့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ Mathilda က Support လို့သာဆိုပေမယ့် သူ့ Damage ကလည်း အတော်လေးကိုပြင်းတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ သူရဲ့ ပညာနှစ်မျိုးလုံးကို ကျွမ်းကျင်အောင်ကိုင်နိုင်ရင် ရန်သူဖက်က Tank အကြီးစားကြီးကိုတောင် Attack ပြင်းပြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ဒုတိယ Skill နဲ့ လှုပ်ရှားရလွယ်ကူအောင်လုပ်နိုင်ပြီး မြန်မြန်သွားနိုင်တော့ ချိုခိုတိုက်ခံရတာကနေ ထွက်ပြေးတာတို့၊ ရန်သူတွေကို လိုက်တိုက်ခိုက်တာတို့ ပိုပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး​။ Guiding Wind က အနီးနားမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့၀င်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင် ပိုမြန်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီးတော့ သူ့ဆီကို မြန်မြန်ရောက်အောင် ခေါ်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။
ရန်သူတွေကို နှောက်ယှက်ပြီး စနောက်ပြီးစိတ်စွချင်ရင် Diggie ကို အသုံးပြုလိုက်ပါ။ သူက Fighter နဲ့ Assassins တွေကို တားစီးနိုင်တဲ့ လမ်းလျောက်တတ်တဲ့ ဇီးကွက်တစ်ကောင်ပဲ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တမူထူးခြားတဲ့ CC (Crowd Control) အစွမ်းကြောင့် လူတိုင်းက အရမ်းလိုချင်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံးက ရန်သူတွေနောက်လိုက်ပြီး ပေါက်ကွဲတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ Skill ဖြစ်တဲ့ Pull Effect ကတော့ ရန်သူတွေရဲ့ Attack ကိုထိန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက် Crowd Control အနေနဲ့ တော်တော်လေးအသုံး၀င်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ “Egg Form” က Recall လုပ်တာကိုဖြတ်သိမ်းလို့ရပြီး အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ Diggie ပေးနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံး အထောက်အပံ့ကတော့ သူ့ အဖွဲ့၀င်တွေနဲ့ သူ့ပေါ်မှာကျရောကနေတဲ့ Crowd Control Effect ကို ပယ်ဖြတ်ပေးနိုင်တာပါဘဲ။
Refaela ကို Revamp ဖို့ စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ကြရတာကြာပါပြီ။ ဟိုဖက် Lane ဒီဖက် Lane လျောက်သွားတဲ့နေရာမှာ အလွန်တော်တဲ့ Refaela ကတော့ အဖွဲ့၀င်တွေ လိုအပ်နေချိန်မှာ အကောင်းဆုံး Back Up ပေးနိုင်ပါတယ်။ Lane တွေကို သိမ်းဖို့နဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ HP ကို အဆပေါင်းများစွာ တိုးစေတာကတော့ သူမရဲ့​​ ဒုတိယ Skill ပါဘဲ။ သူ့ ပထမ Skill ကတော့ ရန်သူတွေ ခြုံထဲမှာ ပုန်းနေတဲ့ နေရာကို ရှာနိုင်တာပါဘဲ။ Rafeala က Crowd Control မှာလည်း အရမ်းတော်ပြီး သူ့ရှေ့မှာရပ်နေတဲ့ ရန်သူတွေကို Stun နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Angel က “Healing for everyone!” လို့ပြောရင် အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
Healer ကြီး Estes ကို မေ့ထားလို့မရပါဘူး။ ဒီ လဘုရင်ကြီးကတော့ သူ့နားမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့၀င်တွေကို Heal နိုင်ပြီး HP ကို မြှင့်တင်နိုင်တဲ့ Skills နှစ်မျိုးပါလို့ အရမ်းကောင်းတဲ့ Support ကြီးဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ထဲက Hero ၄ ယောက်အထိကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပြီး Healing နဲ့ Estes ရဲ့ Physical Attack ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်နော်။ သူ့ရဲ့ ဒုတိယ Skill ကတော့ သူ့ရဲ့ လရောင်ဖြာကျနေတဲ့ နေရာတွေကိုထိတဲ့ ရန်သူတွေကို နှေးကွေးစေတာပါဘဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့ Estes က ဘယ်တော့မှ Heal တာ ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အဖွဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ အရမ်းကို အသုံး၀င်ပါတယ်။
Pro league မှာ အရမ်းကောင်းတဲ့ Support Hero များ
MPL လို ပရိုဖယ်ရှင်နယ် League တွေမှာ Support Hero တွေက လူတွေစိတ်၀င်စားတာ အရမ်းခံရပါတယ်။ မနှစ်က MPL PH Season6မှာ “Feeding Diggie” နည်းလမ်းကတော့ Aura PH ရဲ့ Rafflesia က ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ယူပြီး W ရရှိခဲ့ပြီး Diffgie ရဲ့ 0/21 Stat Line နဲ့ MVP ရရှိခဲ့ပါတယ်။ MPL MY/SG မှာတော့ Resurgence က Kayzeepi ဟာဆိုရင် ဒီ Hero တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီး 1/15/14 KDA နဲ့အတူ ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိပြီး MVP လဲရရှိခဲ့ပါတယ်။ Feeding Diggie ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာတော့ Diggie များများ သတ်လေ ရန်သူတွေက ရွှေနည်းနည်းဘဲရလေပါဘဲ? ပြောရတာလွယ်သလောက် လုပ်ရတာခက်ပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့်သူတို့တွေကို “ပရိုဖယ်ရှင်နယ်သမားတွေလို့” ခေါ်တာပေါ့။
နောက် Support တွေမှာ နာမည်ကြီးတာတစ်ခုကတော့ “Nice One, Baby” ဆိုတာပါဘဲ။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ သူတွေနဲ့ စုံတွဲတွေကစားတဲ့ အခါ အပြောများတဲ့ စကားကနေစတာပါဘဲ။
“Nice One,Baby” တော့ ကစားသမားနှစ်ယောက်က အကောင်းဆုံး Support Hero နဲ့ Core Jungle ကို ရွေးလိုက်ရင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ Support ကစားသမားက Jungler ကို Bodyguard လုပ်ပေးရပြီး Jungler ရဲ့ လုံခြုံရေးကို စောင့်ကြည့်ရမှာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့ စုံတွဲကတော့ Angela နဲ့ Gusion ဖြစ်ပြီး Angela က Healing ကို အာရုံစိုက်ပြီး Assassin က Death များအောင် သက်ဖြတ်ဖို့ တာ၀န်ရှိတာပါ။ MPL PH က Blacklist International အဖွဲ့ ကတော့ Support Hero နှစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Refaela နဲ့ Estes တို့ကို အသုံးပြုပြီး Work Auster Force အဖွဲ့ကို လွန်ခဲ့တဲ့ Season7တုန်းကဘဲ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
Codashop နဲ့ Mobile Legends Diamonds တွေကိုတွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့အုန်းနော်။ ပိုမိုမြန်ဆန် စိတ်ချရပြီး ငွေပေးချေမှု မျိုးစုံကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အာမခံပါတယ်။
Previous articleFree Fire: Submachine သေနတ်တွေကို အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်
Next articleSamurai Era: Rise of Empires ရဲ့ 20% Cash အပိုလက်ဆောင်ရယူနိုင်မယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ်